कल्की | Kavyakunja
केही दिन अघि तर धेरै दिन पछि शाम्भवीको फोन आयो ।
” शार्दूल म बेलाबेलामा अतीतका ती फाँटमा त्यसैत्यसै डुल्न पुग्छु । हामीले टेकेका ती डोब टेक्दै हिड्छु अनि त्यहाँ त्यही तिमीलाई देख्छु । त्यही भएर आज पनि फोन गरेकी अर्थात तिमीलाई सम्झेर ।”
मैले भने- “शाम्भवी तिमी र ममा यही फरक अझै बाँकी छ । तिमी बेलाबेलामा सम्झन्छौ तर म कहिल्यै विस्रन्न । कहिल्यै नविसे्रपछि सायद सम्झीहरनु नै पर्दैन !” केहीबेर हाँसोमा परिणत भएर हाम्रो सम्वाद सकिन्छ ।
म कसैको जन्मदिनको एउटा सानो जमघटमा छु । अमेरिकामा “वर्थ डे” मनाइए पनि नेपाली सँस्कार र परिकार प्रसस्त छन् । भित्र अर्को कोठामा उ बोल्दै छे । केटाहरुको झुण्ड छ उ उभिएकी छे । मेरा आँखालाई उसले आफूतिर बारम्बार तानीरहेकी छे । मेरा जस्तै हरेक आँखाहरु उसमा ठोक्किएर एकछिन् रोकिएका छन् । अनि मेरा जस्तै हरेक निख्खर आँखा उसलाई निहाल्न वाध्य छन् तर त्यो केटीको आभारुप सामू मेरा आँखा धेरैबेर टिक्न सकेनन् ।
ठिटाहरुको हुल एक्कासी बाहिरिन्छ । भान्साको टेबुलमा म रसपान सहित खानपान गर्दैछु । त्यो हुलमा प्रायः परिचित अनुहार छन् तर त्यो एउटा अनुहार एकदमै अपरिचित । सबैले अंकल भनेर अभिवादन गरे तर उसले “हाई बडी” भन्दै मसँग हात मिलाई । म एकछिन् अलमल्ल भएँ । अनि हग गर्न तम्सी । संकोच भयो ।
” ओ नमस्ते ! हाईू” भनि उसले फेरि ।
हुलको एक ठिटोले भन्यो “उ प्रकाश अंकल हो ।”
उसले फेरि निसङ्कोच भनि “हाई, प्रकाश Û कस्तो छ तिमीलाई ?” यो पटक अशिष्ठताको अर्को थप्पड हाने जस्तो भयो मलाई ।
उ अँग्रेजीमा बोलिरहेकी छे म केही बोलिन । मेरो असहजताको महशूस अर्को ठीटोले गर् यो जस्तो लाग्यो । स्पष्टिकरण दिदै भन्यो– “अंकल, उ नेपाली बुझ्छे तर इङ्गलिस मात्र बोल्छे ।” नसोधेको, नखोजेको र नसोचेको जवाफ दियो त्यो ठिटाले । बन्द ओठभित्र मेरा दाँत एक्कासी लड्न थाले आपसमा । टाउको भित्र बारुलो झै भन्भनिएको रिस दाँतले दाँतसँग पोख्न थाले ।
फेरि पनि म केही बोलिन । फिस्स दाँत देखाएर सहमतिको मुन्टो हल्लाएँ तर भित्रभित्रै मनमा उप्रतिको आक्रोशको भेल उर्लिरहेको छ । मान्छेको मन कहिलेकाहीँ अनुहारमा अनुदित भए जस्तै मेरो मन पनि सायद अनुदित भयो होला उसले निधार खुम्च्याउँदै कुम कक्क्र्याउँदै मधुर बोलीमा निर्लज्ज बोली “ओ माई डियर, ह्याण्डसम ! तिमी ठीक त छौ ?” एकै स्वरमा भनि “तिमी साच्चै ह्याण्डसम देखिन्छौ ।”
” तर प्रकाश, तिमी सहज अनुभव गरिरहेका छैनौ । मलाई त्यस्तै लागिरहेछ ।” बोलीमा थोरै आवरणले ढाकी आफ्नो पहिरन जस्तै ।
” हैन केही छैन त्यस्तो ।” उ अँग्रेजीमा बोलिरहेकी छे । म नेपालीमा जवाफ दिइरहेको छु । मभित्र यति बेलासम्ममा धेरै खुल्दुली, उत्सुकता र आक्रोसको युद्ध एकसाथ चलिसकेको छ । मेरो सहजताभित्र असहजातको कालो बादल छाइसकेको छ । मेरो मनको शान्त तलाउको तहमा आवेगको दह मिसिन थालेको छ । धैर्यताको बाँध फुट्न लागे जस्तो भइरहेछ । टिलपिल टिलपिल ! उकुसमुकुस !
” ओ के प्रकाश, म फर्किहाँले” अँग्रेजीमै बोल्दै अर्को कोठातिर लागि । मलाइ अलिकति राहत अनुभूत भयो । लामो सास फेरेँ । कोठा भित्रबाट बाहिर उसको आवाज पहिले जस्तै चर्को र टड्कारो आइरहेछ । गानोमा मौरी झुम्मिए जस्तो गरि ठिटाहरु सबै त्यही झुम्मिएर बसेका छन् ।
मभित्र उत्सुकताको सगरमाथा ठडिन्छ । आफूलाई बुढा पहाडहरु जस्तै स्थिर , धैर्य, सहज र शान्त बनाउँदै म सोच्न थाले- “यो केटी हो को ? यो केटी पक्कै नेपाली होइन । किन भने नेपाली बोल्दिन । होइन, नेपाली नभए नेपाली कसरी बुझ्छे त ? होइन, यो केटी नेपाली नै हो । कता कता लाग्छ यो क्यारेवियन वा ब्राजिलियन पनि हुन सक्छे ! हैन, बंगाली जस्ती पनि छे ! कालीकाली हिस्सी परेकी निक्कै राम्री । भारतको पश्चिम बंगालमा नेपाली भाषीको सरसंगतमा रहेका धेरै बंगालीहरु नेपाली बुझ्छन् तर बोल्न सक्दैनन् । यस्तै पनि त हुन सक्छ । आखिर उसले बोल्ने भाषासँग मेरो के सरोकार ? उसको पहिरनसँग मेरो के दरकार ? उसको चालचलन र हाउभाउप्रति मेरो के अधिकार ? व्यर्थै उसका बारेमा म टेन्सन लिइरहेको छु । म आफूलाई सकारात्क र सहज बनाउने प्रयत्न गर्छु ।
” तिमी ह्याण्डसम देखिन्छौ । ओ माई डियर ह्याण्डसम !” अनि “तर प्रकाश तिमी सहज अनुभव गरिरहेका छैनौ ।” अमेरिकामा केटीमान्छेले केटामान्छेलाई यस्तो भन्नु भनेको प्रेमको सांकेतिक प्रस्ताव हो भन्ने सुनेको थिएँ । उसले केहीबेर अघि भनेका
निक्कैबेर भयो म सोचिरहेको छु । उ मेरा सामु आएकी छैन । कि अब त्यो आउँदिन ? आइमाई मान्छे भनेको बगेको खोलो जस्तै हो । त्यसमा पनि अमेरिका ! केटी, काम र मौसमको भरोसा नभएको ठाउँ । कि त्यसले पनि मलाई कतै गवाँर र पाखे त सोचिन । निक्कै अघि बोस्टनको एउटा रेष्टुरेन्टमा काम गर्दाको सम्झनाले मष्तिष्कको पाना एकाएक पल्टायो । एक साना नेपाली भाइबाट गवाँर र पाखेको विशेषणले आभूशित हुनु पर्दाको दुःखानुभूतिले एकछिन अल्मल्यायो । भरखर अमेरिका छिरेर रेष्टुरेण्टमा काम गर्न थालेको मान्छे म । एक अमेरिकी ग्राहकले बोलेको कुरा राम्रोसँग नबुझ्दा र फर्काउन नसक्दा उनले मलाई त्यो विशेषणको दोसल्ला निसङ्कोच ओढाउँदै भनेका थिए “अँग्रेजी नबुझ्ने यस्ता गवाँर-पाखे किन अमेरिका आउनु ?” मैले नसुने जस्तो गरेँ बोल्नै परेन । अर्की एक नेपाली चेली थिइन काठमाण्डुकी नेवारकी छोरी । मान्छेले मान्छेलाई मान, सम्मान, आपमान जे गर्दा पनि कोही खुशी र कोही दुःखी त हुन्छन नै । मलाइ त्यो अपमानपूर्ण सम्मान दिँदा उनले नमीठो अनुहार लाएको देखिरहेको थिएँ, फिसिकक फोस्रो हाँसो हाँसेर पचाएँ । मनमनै भने- “धन्यवाद भाइ । तिमीले मेरो कमजोरीको किलकिले समायौ ।” प्रतिवाद गर्नु भन्दा नसुने जस्तो गर्न नै ठीक ठाने । अरु केही नेपालीहरु पनि थिए सबैले दाइ भनेर सम्मान गर्थे नजानेको सिकाउथे । दरवारिया खान्दानको हूँ भन्ने ती फुच्चे त्यहाँ काम गर्ने हामी नेपालीमा सबैभन्दा कान्छा र होचा थिए तर अरुलाई होच्याउनेमा सबैभन्दा अग्ला तिनै थिए । सबैले राजाराजा भन्थे आफूलाई राजै ठान्थे । मनले नभने पनि मूखले बेलाबेलामा म पनि भनिदिन्थे । कानाको देशको आँखा चिम्लनु लंगडाको देशमा खुट्टो खोच्याउनु भन्ने सम्झेर चुपचाप बस्थे ।
सोचेँ- “म पनि मुर्खको भाँडो नै हुँ ।” उसले मेरो त्यत्रो प्रशंसा गर्दा मैले त्यही अनुरुपको शाब्दिक वा प्रतिकात्म अभिव्यक्क्ति व्यक्त गर्न सकिन । सायद त्यसैले उ मबाट एकैछिनमा अलग्गिएकी होली ! एक छिनमा नजिक भइ, एकै छिन्मा टढा । यहीँका अमेरिकनहरु जस्तै ! हुन त मान्छेको मन र शिशा उस्तै हो भन्छन् सानो कुराले टुट्ने । के मैले यसालाई टुटाएँ त ? आखिर मलाई राम्रो नभन भन्ने मान्छे को छ यो संसारमा ? मलाई राम्रो भन, तिम्रो मनले खराब ठाने पनि । म मान्छे हुँ भन्ने कुरा मैले किन विर्सेको ? मैले पनि क्षणिक भावुकता मिसिएको भए पनि उसले जस्तै प्रणयमिश्रित प्रेममय बोली बोलिदिएको भए के विग्रन्थ्यो ? मेरै प्रश्नको पहिरोमा म एकछिन पुरिन्छु । उसको कोमल हृदयलाई मेरो कठोर व्यवहार र रुष्ठ अनुहारले सायद चुडियो कि क्या हो ? मलाई फेरि मनको बाघले खेद्न थाल्छ । केही क्षण अघिसम्म आगो भएको मान्छे अहिले म पानी भएको छु । उ मेरो मनको तहमा तैरन थालेकी छे । भित्रभित्रै मभित्र केही हराए जस्तो भइरहेछ । मनले केही खोजे जस्तो भइरहेछ ।
केही बेर फेरि सोचेँ- “हैन अमेरिकामा केटीमान्छेले केटामान्छेलाई यस्तो कुरा भन्नु सामान्य नै होला । भालुको मन खनिउ माथि जस्तो भएको होला मेरो मन !”
अर्को उपाय सोचेँ- “ल म जानु पर्यो” भनेर अली ठूलो स्वार बोले । मुखले बोलेँ मात्र तर मनले हिड्न चाहेको थिइँन । मात्र उसलाई म सुनाउन चाहन्थे र उसको प्रतिकृया बुझ्न चाहन्थे । सुन्ने बित्तिकै उ दौडेर आई । मेरो पाखुरा सामाउँदै कुर्सीमा बसाई र भनी- “एकछिन् बस न !” के खोज्जस् काना आँखा जस्तो भयो मलाई । मन फुरंग, मस्तिष्क हलुंगो भयो ।
” मैले तिमीसँग कुरा गरिसकेकै छैन कहाँ जान लागेको अहिल्यै” म मुस्कुक हाँसे मात्र ।
” ए तिम्रो नाउँ के रे” उसले फेरि मेरो नाउँ सोधी मैले बताएँ । उ अहिले पनि अँग्रेजीमै बोलिरहेकी छे । म मेरो मातृभाषा नेपालीमै बोलिरहेको छु ।
” तिमी के काम गर्छौ ?”
” म सानोतिनो स्टोरमा काम गर्छु ।” मेरो जवाफ सुनेर निधार खुम्च्याउँदै हात फिजाउँदै घाँटी कक्र्याएर उसले भनि- “किन सारा नेपाली स्टोर, ग्यास स्टेशन र ईण्डियन रेष्टुरेन्टमा मात्र काम गर्ने? उसको बोली र हाउभावमा हेय भावको अमिलो गन्ध मिसिएको भान भयो मलाई । मैले स्पष्टिकरण दिइन । फेरि पनि भलाद्मी हाँसो मुसुक्क हाँसे ।
आफूलाई अझ सामन्य बनाउँदै सोधेँ – “कति भयो अमेरिका आएको ?”
सृष्टि विधाको अनुपम सृजनाको स्वरुप नारी, त्याग र तपस्याकी प्रतिरुप नारी, उत्सर्गको उपमा नारी, प्रेमको आधार र स्रोत नारी ! त्यो नारीको श्रद्धा, सुधा, शक्ति, लज्जा, दया, मायाँ, छाँया, दातृ, भातृ र मातृरुपका ती सुन्दर स्वरुप सम्झेँ । अनि त्यही नारीको यो विरुपमय/विभत्स रुप ! यो कल्कीरुप !
म जुरुक्क उठेँ र भने- मिस शारदादेवी उर्फ स्यान्ड्रिया तिमीले सोचे जस्तो म्याराथन धावक म नहुन सक्छु … ! उ निधार गाँठौ पार्दै अँग्रेजीमै फ…फ… उच्चारण गर्दै थिई, म हिडेको हिड्यै भएँ । अहिले त्यही स्यान्ड्रिया शाम्भवीजस्तै सम्झिरहनु नपर्ने गरी मेरो मस्तिष्कमा सधैं नाचिरहेकी छे ।
जून १४, २०११ बोस्टन, अमेरिका